ဘလော့မော်ကွန်း - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
ဇူလိုင်လ 12, 2019 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းဆင်းပွဲ /by cre8or
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/eohnmarmyint10.jpg 550 960 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2019-07-12 15:15:342019-07-12 15:43:17mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ကျောင်းဆင်းများ၏စံချိန်အရေအတွက်
ComPro အဆင့်လက်ခံရေး: ကျွန်ုပ်တို့၏ "မိသားစု" ကိုနယူးကျောင်းသားများကြိုဆိုခြင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2019 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္ /by cre8or
ပြီးခဲ့သည့် 12 လအတွင်း, 15,000 လူအမျိုးမျိုးထံမှ 185 လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့နှင့်တတ်နိုင် join ဖို့အွန်လိုင်းလျှောက်ထား ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်က MS Paid သင်တန်း & ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီနှင့်အတူ။
ဤမျှလောက်များစွာသောလျှောက်ထား process လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ဦး, ထိရောက်တိကျမှု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကြိုဆိုပွဲထုံးစံ၌ဤအများအပြား applications များ processing ၏ဧရာမအလုပ်အကိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်၏အထူးပြုဖြစ်ပါသည်SM အဆင့်လက်ခံရေးဦးစီးဌာန။ သငျသညျနှစျစဉျလေး entries တွေကိုအတူဤမျှလောက်များစွာသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများကဝန်ခံများအတွက်အပိုဆောင်းခြေလှမ်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များ (ဖေဖော်ဝါရီလ, မေလ, သြဂုတ်လနှင့်နိုဝင်ဘာလ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်လက်ခံရေးန်ထမ်းများ၏အောင်မြင်မှုများအားလုံးပိုမိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ချန်ဒရာ, ComPro အဆင့်လက်ခံရေး၏ဒါရိုက်တာ၏အဆိုအရ, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်အဖွဲ့က mum အပေါငျးတို့သပြံ့နှံ့နသောသဟဇာတနှင့်ကွက်တိဝင်ထင်ဟပ်။ လူတိုင်း, အာရုံစိုက်ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း, One-အခြား၏မေတ္တာပါအထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဒါဟာစံပြအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့, ငါတို့လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ကျောင်းသားများကိုတကယ်ကသူတို့ရဲ့ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့် interaction ကတန်ဖိုးထားတယ်။ "
အသစ်သော posts များနှင့်မှတ်ပုံတင်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအထူးသဖြင့်အလုပ်ရှုပ်ကာလဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ပါသည်: တချို့ကိုအမေရိကန်ကျောင်းသားများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ်ကပ်အစီအစဉ်များအောင်, ကျောင်းသားအခန်းပေါင်းထွက်စစ်ဆေးနေ, အစည်းအဝေးကျောင်းဝင်း 24-နာရီနေ့၌ကျောင်းသားများကိုရောက်ရှိလာသောကျောင်းသားအခန်းနေရာရေစာအိတ်ပြင်ဆင်နေ, အခန်းသော့နှင့်ဘောဇဉ် 'passes စီစဉ်၏နောက်ဆုံးမိနစ်လက်ခံမှု သူတို့ရဲ့ဆောင်မှကျောင်းသားများအယူနှင့်အဆင့်လက်ခံရေးနှင့်ကျောင်းအပ်စင်တာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောမှတ်ပုံတင်ရေးနေ့ရက်ကာလအဘို့မြောက်မြားစွာကျောင်းဝင်းရုံးများနှင့်အတူစည်းရုံးရေး။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့တောင်မှလပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နှစ်ကြာ, etc, chatting skyping, အီးမေးလ်ပို့ခြင်း, စာပို့ပြီဘယ်သူကိုနှင့်အတူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးအသစ်များကိုကျောင်းသားများကိုတွေ့ဆုံရန်ရဘယ်မှာ homecoming တူ၏။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့သူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါ, ကျောင်းသားများတခါတရံကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook သို့မဟုတ် LinkedIn တို့ profile များကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုအသိအမှတ်မပြု။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်အတွက်လျှံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ComPro မိသားစုသို့သူတို့ကိုငါကြိုဆိုပါတယ်အဖြစ်ကအားလုံးအတှကျရွှင်လန်းခြင်းနှင့်ကြိုးအတွေ့အကြုံကိုပဲ! (အောက်တွင်ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ )
အဆိုပါ ComPro အဆင့်လက်ခံရေးအဖွဲ့တွေ့ဆုံမည်
Elaine (Guthrie) ကို ComPro ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ဒရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်လက်ခံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ Pat တွဲဘက်အဆင့်လက်ခံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ Nena, Francis က, Lisa ကို, Dima, Girma နှင့်အမျိုးသမီး Melissa အဆင့်လက်ခံရေးအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ကြသည်။ Teja ရုံးအဆင့်လက်ခံရေးအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Sara အပတ်တိုင်းစစ်ကြောင်း၏ applications များနှင့်အဖြေကိုရာပေါင်းများစွာသောသုံးသပ်ပြီး။ Maryam ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများကြီး-ကိုချစ်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားအကြံပေးသည်။ ဆူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်လက်ခံရေးလက်ထောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Dale နဲ့ Charlie တန်ဖိုးရှိသောအခြိနျပိုငျးအလုပျပါတယျ။
Marketing ကို Craig ရှိမုနျ, Dileep ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာနှင့် website ကိုချက်တင်စစ်ဆင်ရေးက Sara ကမူ Max, Rachel, Dileep, Selin နှင့် Craig (စုဆောင်းဒါရိုက်တာ) ကကိုင်တွယ်လျက်ရှိသည်။
- ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော် join ရှိခြင်းမျှော်လင့် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ ComPro မိသားစုယခု 2500 MSCS 85 လူအမျိုးမျိုးထံမှဘွဲ့ရ, ပေါင်း 800 ကျော်လက်ရှိကျောင်းဝင်းအပေါ်ကျောင်းသားများကိုကျောင်းအပ်နှင့်အမေရိကန်တစ်ဝှမ်း Intern များကိုလုပ်နေတာထက်ပိုမိုပါဝင်သည်
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/ee-07006-admissions-team-2019.jpg 855 2000 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2019-02-26 17:10:522019-02-26 21:54:11ComPro အဆင့်လက်ခံရေး: ကျွန်ုပ်တို့၏ "မိသားစု" ကိုနယူးကျောင်းသားများကြိုဆိုခြင်း
နိုင်ဂျီးရီးယားပါမောက္ခ mum မှာသင်ကြားခစျြ
အောက်တိုဘာလ 3, 2018 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္ /by cre8or
Obinna Kalu သင်ကြားမှုချစ်သောသူနှင့်အနာဂတ်အပေါ်တစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်မျက်စိရှိသူတစ်ဦးပြောင်းလဲနေသော, စိတ်အားထက်သန်ငယ်ရွယ်လက်ထောက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ပါမောက္ခ Kalu နှင့်အတူထိုင်နေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒြေဝင်ရောက်ကြိုတင်ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်သုံးစွဲအချိန်အပါအဝင်ကသူ့နောက်ခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေတစ်စီးရီး, မေးတယ်။
မေး: သင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှဆုံးမဩဝါဒပေးစတင်ရန်ခဲ့ပါသနည်း
A: မတ်လ 2015 အတွက် MSCS အစီအစဉ်ကိုအကွာအဝေးပညာရေးသင်တန်းများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးစတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သြဂုတ်လ 2017 ၌ငါဒီမှာဖဲရ်ဖီးလ်အတွက် On-ကျောင်းဝင်းကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ် ( "ComPro") သင်တန်းများဆုံးမဩဝါဒပေးစတင်ခဲ့သည်။
မေး: သင်အဘယ်ကြောင့် mum မှာဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ပျော်မွေ့သလဲ?
ဖြေငါ့အဘို့ပထမဦးဆုံးဆွဲဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ကျောင်းဝင်းပတ်ဝန်းကျင်-ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပါ, ကျွန်တော်ပျော်မွေ့။ ကျွန်မအလွန်ငါ CS ဌာနအတွက်ကဒီမှာအတူအလုပ်လုပ်အဖွဲ့, ငါ့ Co-ဒြေအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ရရှိနိုင်အသိပညာ၏အနံနှင့်အတိမ်အနက်ကိုလိုပဲ။
ထို့နောက်အကြီးအကျောင်းသားများကိုကျနော်တို့ငါသွန်သင်ကြပြီသောလူတန်းစားအတွက်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့ရ။ သင်ကြားရေးအတွက်ခြုံငုံနေ့စဉ်အတွေ့အကြုံကို / ကဒီမှာလေ့လာသင်ယူရိုးရှင်းစွာကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သည်!
ဖြေ mum အလွယ်တကူပရော်ဖက်ရှင်နယ် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုမြှင့်တင်ရန်အများဆုံးတတ်နိုင်နည်းလမ်းများပေးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအကောင်းဆုံးအမေရိကန်အိုင်တီကုမ္ပဏီများက-ထားတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားဆည်းပူးမရနိုင်အချို့အတွက်ထိပ်တန်းထစ် full-ပေးဆောင်လက်တွေ့ကျတဲ့အလုပ်သင်အတွေ့အကြုံကိုရယူခံစားနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများ, အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်အလွန်တောက်ပဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အစဉ်အမြဲအသစ်အစိတ်ကူးများနှင့်နည်းပညာများကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်ကြိုးစားရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CS သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပထမဦးဆုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
2004 အတွက်ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်ကဒီမှာလာမယ့်ရှေ့တော်၌အင်္ဂလန်တွင်အလားတူသခင်၏အစီအစဉ်တွင်လေ့လာနေကြိုတင်သုံးနှစ်ကြာပြီးမှ, ငါလွယ်လွယ်ကူကူနှစ်ခုအကြားထူးခြားတဲ့ခြားနားချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ CS အစီအစဉ်တွင်အလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့, ရည်ရွယ်ချက်-ဒီဇိုင်းက MS ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းများရှိသမျှတို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများကအလွန်မြင့်မားဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာများနှင့်အတူကျောင်းသားများကိုတပ်ဆင်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။
မေး: mum မှာလေ့လာနေ၏ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်အားသာချက်များဘာတွေလဲ?
A: ပထမဦးဆုံးအမူထူးခြားတဲ့အားသာချက်တစ်ခုအနိမ့်-စိတ်ဖိစီးမှု, မျှတသော, ပျော်ရွှင်, အကြိုးပွုဘဝအသက်ရှင်ဖို့ရာကျောင်းသားများ, ဒြေနှင့်ဝန်ထမ်းများအသုံးပြုမှု Transcendental Meditation® technique ကို, လေ့လာသင်ယူသည်။
TM အလိုအလျောက်ငါ့ကိုမျှတတဲ့ဘဝကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ TM အလိုအလျောက်ငါ၏ပုံမှန်အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ, ငါသည်ငါ့သင်ကြားမှုအချိန်ဇယားကိုရရှိသွားတဲ့ဘယ်လို hectic နေပါစေငါနေဆဲအမြဲအတွင်းစိတ်ချမ်းသာ, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုဟုခံစားရကြောင်းကိုရှာပါ။
နောက်ထပ်အားသာချက်ကိုသူတို့ ComPro MSCS အစီအစဉ်တွင်ဆည်းပူးသောဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းကျွမ်းကျင်မှု၏အရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်။ 1996 ကတည်းက 1000 အမေရိကန်ထက်ပိုပြီးကုမ္ပဏီများမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေငှားရမ်းထားပါပြီ။ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအလုပ်သင်လစာ $ 80,000 န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကငါ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးလေ့လာမှုတွေမှာတော့ကျွန်မပထမဦးဆုံးနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဂို့တက္ကသိုလ်ကနေသင်္ချာနှင့်စာရင်းအင်းများအတွက်သိပ္ပံဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ကောလိပ်မှဘွဲ့ရပြီးနောက်, ကျွန်မထရိန်နင်ပရိုဂရမ်မာအဖြစ်ဂို့အတွက်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်ထင်ရှားတဲ့ software development ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲနေခဲ့ရသည်။ သူတို့ရဲ့အီလက်ထရောနစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနည်းပညာဦးစီးဌာနအတွက်ဘဏ်များအတွက်အလုပ်လုပ်သောအောက်ပါပြီးတော့နှစ်ခုထက်ပိုသောနှစ်ပေါင်း။
ထိုအခါငါသိပ္ပံနှစ်ခုမာစတာ 2008 အတွက်ဘွဲ့ရ, ဒီမှာ mum မှာ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမှာအင်္ဂလန်မှာ Bedfordshire တက္ကသိုလ်ကနေကွန်ပျူတာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ In-One ဘွဲ့နှင့်အခြားသောဝင်ငွေပေါ်သွား၏။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးကျနော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဘဏ်ထဲမှာတဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ mum အကြောင်းကိုသိခဲ့ရတယ်။ သူကအချိန် (~ 1999) မှာကဒီမှာကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောမိမိ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအနေဖြင့်မိခင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
မေး: သင်သည်သင်၏ ComPro ကာလအတွင်းအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဘယ်မှာSM အလုပ်သင်နှင့်ဘွဲ့ရပြီးနောက်?
A: AECOM မှာ Project မှ Programmer ခဲ့သည် SAP မှာ Software ကို Developer တွေ III ကိုအရီဇိုးနား၌ငါ့ Intern များကိုအဘို့နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် mum ဒြေမဝင်ခင် Washington, DC ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှ NORC မှာဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကငါဘွဲ့ရအဆင့်တွင် Web ကိုလျှောက်လွှာ Programming, လုပ်ငန်းဗိသုကာပညာ, မော်ဒန် Programming အလေ့အကျင့်များနှင့်အခြေခံ Programming အလေ့အကျင့်, ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာသင်ပေးနှင့်လည်းဘွဲ့ကြိုအဆင့်တွင်ဒေတာများ structures များသွန်သင်ကြပြီ။
Q: အကြီးအအလုပ်အကိုင်များကိုလိုခငျြတဲ့သူ software ကို developer များအဘို့အဘယ်သို့အကွံဉာဏျရှိသနည်း
ဖြေသူတို့ကိုသင်ယူမှုကိုလိုက်နှင့် ပို. ပင်အောင်မြင်ရန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေဘို့အသက်ပျိုသောငါ၏အကွံဉာဏျ, developer များအယောင်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်သောကိရိယာများ, နည်းစနစ်များနှင့်သို့အရငျနဲ့အလုပ်လုပ်ခံစားရန်နည်းပညာများတစ်ခုတိုးပွားလာရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ဆော့ဖျဝဲနည်းပညာအတွက်အနာဂတ်တောက်ပသည်အတိုင်း, အသစ်သောအရာသင်ယူခြင်းဆက်ကြိုးစားပါ!
သင်တို့သည်ငါတို့၏ထူးခြားတဲ့ MSCS ဒီဂရီပရိုဂရမ်တစ်ခုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုဖြတ်ပြီးလာတစ်ချိန်ကမိနစ်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။ ဒါဟာအလွယ်တကူပရော်ဖက်ရှင်နယ် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမြှင့်တင်ရန်အများဆုံးတတ်နိုင်နည်းလမ်းများပေးထားပါတယ်, သင်ဒီမှာအမေရိကန်အတွက်အကောင်းဆုံးအိုင်တီကုမ္ပဏီများကအချို့အတွက်ထိပ်တန်းထစ်လက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရရှိနိုငျသောမှတဆင့်
မေး: ကျောင်းသားများကိုသင့်ရဲ့သင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သို့ပြောသလဲ?
ဖြေမွန်ဂိုလီးယားကနေတစ်ဦးကဟောင်းကကျောင်းသားမကြာသေးမီကငါ Bellevue, WA အတွက်ဆော့ဝဲဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရရှိ "မေးလ်ပို့ပေး။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုဆုံးမသွန်သင်သောအသိပညာတန်ဖိုးရှိသောကြီးနှင့်ငါ့အလုပ်သင်ရှာဖွေရေးနှင့်အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါနောက်ကျော-အဆုံးအဘို့, Java ကိုအသုံးပြုပြီးပါလိမ့်မည်။ သငျသညျဤမျှလောက်ပါမောက္ခ Kalu ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
A: ရေရှည်အဘို့အကြှနျုပျ၏သင်ကြားမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ဆက်လက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ထိုအခါငါကိုလည်းအနီးအနာဂတျမှာအတုထောက်လှမ်းရေးများ၏ဒေသများ၏တဦးတည်း၌ငါ့ပါရဂူဘွဲ့ကိုလိုက် (အပြိုင်အတွက်) မှမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. မရသည့်အခါပါမောက္ခ Kalu ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပသော 365 ဧကကျောင်းဝင်းအပေါ်စက်ဘီးစီးခြင်း, လမ်းကြောင်းပြေးနှင့်တောင်တက်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/eIMG_5208.1.jpg 3456 5184 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2018-10-03 22:06:462018-10-08 12:03:51နိုင်ဂျီးရီးယားပါမောက္ခ mum မှာသင်ကြားခစျြ
2018 ComPro ကျောင်းဆင်းပွဲ & Homecoming
ဇူလိုင်လ 11, 2018 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, ကျောင်းဆင်းပွဲ /by cre8or
ကျွန်ုပ်တို့၏ဇွန်လ 22-24th ကျောင်းဆင်းပွဲတနင်္ဂနွေပါတီများ, ဘုန်းအသရေနှင့်ပျော်ပွဲစားနှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ဦးလည်းရွှင်လန်း homecoming အခမ်းအနားဖြစ်ခဲ့သည်။ 387 လူအမျိုးမျိုးထံမှတစ်ဦးကစံချိန် 29 ComPro ကျောင်းသားများအတွက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒီဂရီ၌မိမိတို့က MS ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
နေ့ 1: Pre-ကျောင်းဆင်းပွဲလူမှုရေးရေခဲမုန့်, ဥယျာဉ်ကိုညစာပါတီနှင့်ကျောင်းဆင်းပွဲဆုအခမ်းအနား။
ထူးချွန် ComPro ဘွဲ့ရ:
Mosheer Yousef မာမွတ် (ပါလက်စတိုင်း) & Candy ကို Claire Cadungog (ဖိလစ်ပိုင်)
နေ့ 2: ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့!
ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့ဗီဒီယို➜ (18 34) Highlight
နေ့ 3: နှစ်ပတ်လည် ComPro ပျော်ပွဲစား
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အ ComPro ကျောင်းသားဟောင်းများမှဂုဏ်ယူပါတယ်!
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/DSC04377-163.jpg 468 607 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2018-07-11 16:32:232018-07-11 17:04:362018 ComPro ကျောင်းဆင်းပွဲ & Homecoming
မေလ 29, 2018 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္ /by cre8or
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/eIMG_2219_462X284b-ds.jpg 435 700 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2018-05-29 21:05:082018-06-18 19:10:28ComPro ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုဖို့လျှို့ဝှက်ချက်
မေလ 26, 2018 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္, သတင်း /by cre8or